(१९३७-०६-१५) १५ जुन १९३७ (उमेर ८३)
मुम्बईमा पदस्थापनको दौरान उनको आफ्नो गाउँ रालेगन मा आउने र जाने गर्दथे । तिनीले गाउँको ढुंगा माथि बसेर गाउँ सुधार गर्ने सम्बन्धमा सोच्ने गर्दथे। सन् १९७८ मा स्वेच्छिक अवकाश लिएकर रालेगन आएर उनले आफ्नो सामानजिक कार्य प्रारम्भ गरेका थिए। उनको गाँउमा बिजुली र पानीको सार्है दुःख थियो। अन्नाले गाउँवासीहरूलाई नहर बनाउने र खाल्टो खनेर आकाशको पानी जम्मा गर्नको लागि प्रेरित गरेका थिए र उनी आफु पनि यसमा योगदान गरेका थिए। अन्नाले सुझावमा गाउँमा विभिन्न स्थानहरूमा रूखहरू रोपिएका थिए। गाउँमा सौर्य उर्जा र गोबर ग्यासबाट बिजुली उत्पादन गरिएको थियो। उनीहरूले आफ्नो जग्गा बच्चाहरूको होस्टेलको लागि दान गरेका थिए र आफ्नो अवकाश कोषबाट प्राप्न हुने रकम गाउँ विकासको लागि समर्पित गरि दिएका थिए। उनी गाउँको मन्दिरमा नै बस्ने गर्दछन् र होस्टेलमा बच्चाहरूको लागि बनाइने खाना खाने गर्दछन् । अहिले गाउँको हरेक व्यक्तिहरू आत्मनिर्भर छन्। वरिपरिको गाउँको लागि पनि यस गाउँबाट चारा, दुध आदि जाने गर्दछ। यो गाउँ आज शान्ति, सौहार्द्र एंव सहयोगको उदाहरण बनेको छ।
२००८ जित गिल मेमोरियल सम्मान विश्व बैंक
हजारे अविवाहित हुन् । उनी सन् १९७५ देखि रालेगन सिद्धिको सन्त यादवबाबा मन्दिरसँगै भएको सानो कोठामा बस्दै आइरहेका छन् । सन् २०११ अप्रिल १ मा उनले आफ्नो बैंक खाताको रकम रू. ६७,१८३ तथा रू. १,५०० नगद रहेको घोषणा गरेका थिए ।  रालेगन सिद्धिमा ०.०७ हेक्टरको पारिवारिक जग्गा समेत उनको स्वामित्वमा रहेको छ, जुन उनको दाजुभाइहरूले प्रयोग गर्ने गर्दछन् । गाँउ तथा भारतीय सेनाले अाफूलाई प्रदान गरेको दुई स्थानको जग्गा उनले गाउँलाई दान गरेका थिए । 
"https://ne.wikipedia.org/w/index.php?title=अन्ना_हजारे&oldid=849900" बाट अनुप्रेषित
अन्तिम सम्पादन २६ जुलाई २०२०, २२:०६
यो पृष्ठलाई अन्तिमपटक २२:०६, २६ जुलाई २०२० मा परिवर्तन गरिएको थियो।